यसरी भेटेका थिए कपिल शर्माले जीवनसाथी
फरकधार / जेठ ३, २०७६
एजेन्सी– ‘कमेडी नाइट विथ कपिल’ र ‘द कपिल शर्मा सो’का सञ्चालक कपिल शर्मा केहीअघि विवाह बन्धनमा बाँधिए । लामो समयसम्म पर्दाबाट गायव भएका शर्मा गिन्नी चतरथ नामकी युवतीसँगको विवाहपछि फेरि चर्चामा छन् । अहिले उनी कमेडी सोका साथ सानो पर्दामा आइरहेका छन् ।
आजभाेलि त कपिलले बारम्बार आफ्नी श्रीमतीसँगकाे फाेटाे सेयर गरिररहेका हुन्छन् । अनि उनकी श्रीमतीले पनि कपिलसँगका फाेटाे सेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । गिन्नी चतरथको वास्तविक नाम भवनीत चतरथ हो । उनलाई मायाले सबैले गिन्नी भनेर बोलाउँछन् ।
जलन्धरको शिख परिवारमा जन्मिएकी गिन्नी र कपिल शर्माको भेट पहिलोचोटि सन् २००५ मा मुम्बईमा भएको थियो । त्यतिवेला कपिल २४ र गिन्नी १९ वर्षका थिए ।
कपिल शर्मा त्यस समय थिएटरमा सो निर्देशकको काम गर्थे । अडिसनकै दौरान कपिल शर्माको भेट गिन्नीसँग भएको थियो । गिन्नीको कामबाट उनी प्रभावित भए र उनलाई नाटकको हिस्सा बनाए । त्यस समयमा गिन्नी कपिलका लागि घरबाट खाना लिएर आउने गर्थिन् ।
सुरुमा अभिनेत्री बन्ने सपना देखेकी गिन्नीले सन् २००९ मा स्टार वानको स्ट्यान्ड–अप कमेडीमा भाग लिएकी थिइन्, जसमा कपिल शर्मा पनि थिए । सोपछि गिन्नीलाई पञ्जाब टेलिभिजनबाट अफर पनि आयो ।
तर, उनले अभिनयबाट टाढा रहने बताइन् । फाइनान्समा एमबिए गरेकी उनले आफ्नो बाबाको व्यावसायमा सघाउने निर्णय गरिसकेकी थिइन् ।
कपिल शर्मा पहिलोचोटि गिन्नीको हात माग्न जाँदा गिन्नीका बाबाले अस्वीकार गरेका थिए । पछि फेरि २०१६ डिसेम्बरमा कपिलले फोन गरेर गिन्नीसँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । यसपालि भने कपिलको प्रस्तावलाई गिन्नीका बाबाले स्विकारे ।
१७ मार्च २०१७ मा कपिलले आफ्नो फ्यानसँग गिन्नी आफ्नी श्रीमती भनेर इन्स्टाग्राबाट जानकारी दिएका थिए ।
कपिल शर्मा र गिन्नी चतरथ हनिमुन नजाने भएका छन् । खासमा कपिल आफ्नो आउँदै गरेको नयाँ सोको तयारीमा व्यस्त भएकाले हनिमुन योजना नबनाएका हुन् । उनी छिट्टै नै नयाँ सो लिएर आउँदै छन् ।
कतारबारे किन बाेल्दैनन् ट्रम्प ?
ब्लड क्यान्सर कसरी हुन्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय
पुदिनाका फाइदा हामीले भुलिरहेका हुनसक्छौँ
अमेरिकाको मोस्ट वान्टेड सूचीका तालिबानी नेता जो लुकिरहेका थिए, अमेरिकाको ‘नाकै तल’
मिर्गौलाको पत्थरी हटाउने ५ घरेलु औषधि
फरक धार | भदौ ३१, २०७६
दक्षिण कोरियाली नेताहरु किन खौरिरहेछन् कपाल ?
६९ वर्ष पुगेका मोदीका लागि ७ हजार किलो, ७ सय फिट लामो केक
जापानको राजनीतिमा उदाउँदै नयाँ अनुहारः सिन्जिओ कोइजुमी